Print Peppermint - Kaadị azụmahịa omenala & Ngwaahịa bipụta
EGO $$CAD€ EUR£ GBP
Ụgbọ ala echekwara
Ihe Nkwụghachi Regwọ
Artkpụrụ Omume Nkà
Usoro mbipụta akwụkwọ nkọwa
Banyere Companylọ ọrụ ahụ
Ndụmọdụ okike efu
Were Austin, onye isi ihe okike anyị, were nkeji 20, kparịta ọrụ gị.
Nye iwu Maka Akara
Jupụta karịa ihe atụ 25 dị ịtụnanya nke ọrụ arụchara nso nso a.
Nye iwu ngwugwu ihe nlele>
Kaadị azụmahịa niile
Ebube Gloss Spot
Edges nwere agba
Ọrụ Nzube Kaadị Azụmaahịa
Nhazi kaadị omenala
Hazie kaadị azụmaahịa ahaziri ahazi yana ọtụtụ mmecha pụrụ iche dịka ị nwere ike imeli!
Hazi Ugbu a
Ihe nlere anya okike dị egwu!
Jupụta karịa ihe atụ 25 dị ịtụnanya nke akwụkwọ dị iche iche na mmecha pụrụ iche.
Nhazi kaadị nzi ozi omenala
Wulite kaadị ozi nke nrọ gị site na ịhazi àgwà ọ bụla.
Hazie nke gị Ugbu a >
Mpempe akwụkwọ ozi foil ewelitere
Jide nlebara anya na-ekwe nkwa site na iji foil ọla a wulitere na ọla edo, ọla ọcha ma ọ bụ holo!
Ụlọ ahịa akwụkwọ ozi foil ewelitere >
Mee ka kaadị azụmahịa gị gosi onye ọ bụla ị nọ ebe a ka ị na-azụ ahịa siri ike. Mmecha pụrụiche pụrụ iche na-adịghị agwụ agwụ, nha na oke akwụkwọ dị elu.
Zụa kaadị azụmahịa omenala
Ihe mmado & akara
Debe ika gị ebe niile! Ihe mmado na akara bụ ụzọ na-atọ ụtọ nke ukwuu mana ọ bara uru iji si na enweghị akara gaa na akara ozugbo.
Ahịa ihe mmado & akara
Emere ndụ ka eme ememe! Nye iwu akwụkwọ ịkpọ òkù omenala, ọkwa na ihe ndị ọzọ iji cheta oge pụrụ iche gị.
Akwụkwọ ịkpọ òkù ụlọ ahịa & ngwa akwụkwọ
Akwụkwọ edemede Akwụkwọ Ozi
Tọọ ụda maka ika gị nwere mbipụta akwụkwọ ozi deboss na omenala Pantone agba, ebipụtara na okomoko dị nro mana nke buru oke ibu.
Ụlọ ahịa Mbipụta Akwụkwọ Ozi
Gwa ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị enyi gị ozi pụrụ iche n'ụdị akwụkwọ njedebe dị elu, nha, na mmecha pụrụ iche.
Zụta kaadị nzi ozi omenala
Kaadị Ahịa Metal
Mee nkwupụta kachasị ike site n'inye onye ahịa ọhụrụ gị ihe kaadị azụmahịa igwe anaghị agba nchara siri ike, nke nwere laser dị ọcha.
Ụlọ ahịa kaadị azụmahịa metal
Ihe ịrịba ama & akwụkwọ mmado
Uwe & akpa
Ozi ohuru sitere na Blog Design
Otu esi azụlite (ma na-echekwa) ụda olu nke ika gị
Ịmepụta ụda olu dị mkpa maka atụmatụ azụmaahịa ọ bụla. Idokwa n'ụda olu na-agbanwe agbanwe na-enyere aka ịkọrọ ndị na-ege gị ntị gbasara azụmahịa gị. Na mgbakwunye, ọ na-eme ka ha na azụmahịa gị dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru maka ịmepụta azụmahịa na-aga nke ọma. Nke a bụ ntuziaka nzọụkwụ site na otu esi… GỤKWUO
Ngwa 5 kacha elu maka ịtụgharị foto ka ọ bụrụ faịlụ ederede
Ngwa OCR dị n'ịntanetị bụ mgbakwunye dị ịrịba ama na ngwa odee ọ bụla taa. Yabụ, kedu na nke ndị ha kwesịrị iji na 2022? Ịtụgharị foto ka ọ bụrụ ederede a na-edezi bụ ihe mgbakwunye dị ịrịba ama na azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ stash odee. Ngwa ndị a nwere ike ime ka ndụ dịkwuo mfe site n'ịgbanwe onyonyo ka ọ bụrụ ederede edezi maka ojiji n'ọdịnihu yana ihe ndị ọzọ. Dị ka… GỤKWUO
Ndụmọdụ 10 iji mee vidiyo na-achọ ọkachamara maka ndị mbido
Foto: akụkọ akụkọ site na Freepik Dị ka otu nnyocha si kwuo, ọdịnaya vidiyo na-eme 82% nke okporo ụzọ ịntanetị n'afọ a. Nke ahụ pụtara na ọtụtụ na-enwe mmasị ikiri vidiyo mgbe ha na-achọgharị na ịntanetị na-achọta ozi ọhụrụ. Ma gịnị mere ha ji hụ vidio n’anya nke ukwuu? Vidiyo na-enweta ya karịa n'ihi na ndị ọrụ nwere ike kesaa ọdịnaya ahụ n'ụzọ dị mfe na mkpịsị aka ha. … GỤKWUO
Chọta anyị na -elekọta mmadụ
Jikọọ maka Atụmatụ Nhazi & Mbelata Pụrụ Iche
Biko tinye nọmba site na 10 na 10.
Kedu ihe bụ 6 + 4?
Nweta Nweta & Nweta Nzuzo!
Sonye na akwukwo ozi anyi wee nweta $ 10 nzizi nke mbu.
Nwebiisinka 2022 - Print Peppermint Inc.
Ụkpụrụ Kuki anyị
Chekwaa ụgbọ ibu gị
Tinye aha ụgbọ ibu
Kekọrịta ụgbọ ibu gị
A dochiela ụgbọ ala
Buru ụzọ banye iji chekwaa ụgbọ ala